နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒေးနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်း ဘာတွေမှားနေလဲ
22 ก.ย. 2562 - 18:41 น.
ဘာစီလိုနာဟာ နောက်ဆုံး ၅ပွဲအပြီးမှာ ၅မှတ်သာ ရထား
ဘာစီလိုနာဟာ စပိန်ရဲ့ အထင်ကရ အသင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ များစွာကို ဆက်တိုက် ရယူနေတဲ့ အသင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲယ်မက်ဒရစ်နဲ့ အပြိုင် စပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမည်ကြီး ဘာစီလိုနာဟာ ၂၀၀၆ခုနှစ် ရီကတ် လက်ထက်ကနေ ၂၀၀၉ ပတ်ဂွါဒီယိုလာ၊ အဲ့ဒီနောက် လူးဝစ်အင်းနရစ်အထိ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရခဲ့တဲ့ အသင်းပါ။
လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား မက်ဆီအပါအဝင် ထိပ်တန်း အဆင့်ရှိတဲ့ နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေ များစွာ ရှိနေသေးပေမယ့် ဘာစီလိုနာရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ကျဆင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီ မှာ ဖလား ၃လုံးရမယ်လို့ အားလုံးက တစ်ပတ်ထားကြသလို တကယ်လည်း အခွင့်အရေး ကောင်းခဲ့ပေမယ့် လီဗာပူးလ်ကို ပထမအကျော့ ၃ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးမှ အန်းဖီးလ်မှာ ၄ဂိုးပြတ် ရှုံးတာ၊ နောက် စပိန်ဘုရင့်ဖလားပွဲမှာပါ ထပ်ရှုံးခဲ့တာက ဘာစီလိုနာရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ကာလတွေကို ရောက်လာပြီးလားဆို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအတွက် လာလီဂါ ၂ကြိမ်ယူထားပေမယ့် အခုချိန်အထိ ဟန်ချက်ညီအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတဲ့ ဗယ်လ်ဗာဒေး
ဘာစီလိုနာရဲ့ အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် နည်းပြဖြစ်သူ အနက်စ်တို ဗယ်လ်ဗာဒေးဟာ အဓိက ကျခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘာစီလိုနာဟာ နည်းပြ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်တိုင်း ထိပ်တန်း အဆင့်ရှိတဲ့ နည်းပြတွေထက် ကစားသမား ဟောင်းတွေ၊ လူငယ်အသင်းနည်းပြတွေနဲ့ မထင်မရှားနည်းပြတွေကိုသာ ခန့်အပ်လေ့ ရှိတာပါ။ အသက် ၅၅နှစ် အရွယ်ရှိတဲ့ ဗယ်လ်ဗာဒေးဟာ ဘာစီလိုနာ ကစားသမားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် နည်းပြဘဝမှာတော့ အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမား ရခဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရာထူးက ထွက်သွားတဲ့ လူးဝစ် အန်းနရစ်နေရာမှာ ဆက်ခံခွင့်ရတဲ့ ဗယ်လ်ဗာဒေးဟာ ဘာစီလိုနာကို လာလီဂါ ချန်ပီယံ ၂နှစ်ဆက်တိုက် ရယူပေးနိုင်ခဲ့သလို အဓိက ဆုဖလား ၄လုံး ရယူပေးခဲ့သူပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရိုးမားကို ၄-၁ဂိုးနဲ့ နိုင်ခဲ့ပြီး ရောမ မြေမှာ ၃ဂိုးပြတ် ရှုံးခဲ့တဲ့ အဖြစ်မျိုး မနှစ်ကလည်း လီဗာပူးလ်ကို ၄ဂိုးပြတ် ရှုံးပြီး ထွက်ခဲ့ရတာကတော့ ဘာစီလိုနာ ပရိသ်တွေအတွက် နာကျင်လွန်းတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပါ။ ၂၀၁၅မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ရခဲ့ပြီးနောက် ဘာစီလိုနာဟာ နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒေးလက်ထက်မှာ တိုးတက်မှု မရှိလာခဲ့သလို ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ ကစားဟန်ပါ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါ ဖြစ်နေတဲ့ အထိပါ။ မနှစ် ရာသီကုန်မှာ အထုတ်ခံရမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပေမယ့် စာချုပ်သစ်တိုးခဲ့တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာဟာ ဒီဖက်နှစ် စပိန်လာလီဂါမှာ ဆက်တိုက် အောင်မြင်မှုတွေ ရနေတာ အားလုံးအသိပါ။ လာလီဂါရဲ့ နောက်ဆုံး ၁၁ကြိမ်မှာ လာလီဂါမှာ ၈ကြိမ်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကိုလည်း အဲ့ဒီ ၁၁နှစ်အတွင်းမှာ ၃ကြိမ်အထိ ရခဲ့တာပါ။ ဒီလို စံချိန်တွေကောင်းတဲ့ လာလီဂါမှာ ဗယ်လ်ဗာဒေးရဲ့ ဘာစီလိုနာက ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ ဒီနှစ်ရာသီ အဓိက တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေက ဘာစီလိုနာအတွက် ခက်ခဲစေတာဖြစ်သလို နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒေးရဲ့ လူထုတ်ပုံ၊ နေရာ ချထားမှုတွေကလည်း အသင်းရဲ့ ရလဒ်ပိုင်းကို ဆိုးရွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်လာလီဂါပွဲစဉ် ၅ပွဲအပြီးမှာ ဘာစီလိုနာဟာ ၂ပွဲနိုင်၊ ၁ပွဲသရေနဲ့ ၂ပွဲအထိ ရှုံးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ ရလဒ်တွေထဲမှာ အသင်းငယ် ဂရန်နာဒါ၊ ဘီလ်ဘာအိုတို့ကို ရှုံးခဲ့သလို တန်းတက် အိုဆာဆူနာကိုလည်း အဝေးကွင်းမှာ သရေကျခဲ့တာပါ။ လာလီဂါ နောက်ဆုံး အဝေးကွင်း ၃ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့သလို ၂၀၀၁ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမအဆုံးအကြိမ် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ အဝေးကွင်း အနိုင်မကစားနိုင်ခဲ့တာပါ ၇ ပွဲအထိ ရှိခဲ့ပါပြီ။ ရာသီအဖွင့် ၅ပွဲအပြီးမှာ
၇မှတ် သာရသေးတာကလည်း ၁၉၉၄-၉၅ နောက်ပိုင်း ရမှတ် အနည်းဆုံး ဖြစ်ပြီး နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒေးအတွက် ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီနဲ့ ဆွာရက်ဇ် ဟာ ဘာစီလိုနာအတွက် အရေးပါဆဲဖြစ်နေပါတယ်။
မက်ဆီကို မှီခိုလွန်းအားကြီးတဲ့ ဘာစီလိုနာဟာ သူမကစားနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့် မက်ဆီ မရှိချိန် ဂရီးဇ်မန်း၊ ဒီယောင်တို့လို ကစားသမားတွေအပြင်၊ ဆွာရက်ဇ်၊ အာသာ၊ ဗီဒါးလ်၊ ရာကီတစ်၊ ပီကေး၊ ဘူးစကွတ် တို့လို ထိပ်တန်း အဆင့်ရှိ ကစားသမားတွေ ရှိနေပေမယ့် အသင်းကဟန်ချက်က လုံးဝ မညီဘဲ ဖြစ်နေတာပါ။ ခံစစ်ပိုင်းက ပွဲတိုင်းနီးပါ ဂိုးပေးနေရသလို ကစားသမားတွေကို လူမှန်၊ နေရာမှန် မချနိုင်တာလည်း အဓိက အချက်လို့ ပြောရမှာပါ။ အက်သလက်တီကိုမှာ အမြဲ ဂိုးသွင်းလေ့ရှိတဲ့ ဂရီးဇ်န်းတစ်ယောက် ရုန်းကန်နေရသလို၊ ဒီယောင်ရဲ့ကို နေရာ မှားသုံးစွဲနေတယ်လို့ နယ်သာလန် ဘောလုံးသမားဟောင်းတွေက ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
ဥရောပမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက် ရယူခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲယ်တို့ရဲ့ ကျရှုံးလာမှုက ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေအတွက် အခွင့်အကောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ မနှစ်က သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မက်ဆီ အသက်အရွယ်ရလာမှု၊ ဆွာရက်ဇ် အရင်လို ခြေစွမ်းမျိုး မရတော့တဲ့အချိန် ကျန်တဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေရဲ့ ရုန်းအားကလည်း ထင်သလောက် အလုပ်မဖြစ်တော့လို့ ဘာစီလိုနာဟာ နေမာကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။ နေမာကြောင့် ကော်တင်ညိုကို အငှားချခဲ့ပြီးမှ အဲ့ဒီ အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်လာခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း ဘာစီလိုနာကို မက်ဆီမရှိရင် ဦးဆောင်မယ့်သူ မရှိဘဲ ဖြစ်နေတာပါ။ ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီအဖွင့်ရလဒ်တွေက ဗယ်လ်ဗာဒေးကို ထုတ်ပယ်ဖို့ လုံလောက်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေက ယုံကြည်နေကြပေမယ့် ဘုတ်အဖွဲ့က ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ချိန်တုန်းက သူမတူအောင် ကစားကွက်လှပခဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်း ဗယ်လ်ဗာဒေးနဲ့ ဘယ်လို အဆုံးသတ်မလဲ၊ သူ့အနေနဲ့ရော ဘာစီလိုနာမှာ ရာသီကုန်အထိ ဆက်ရှိပါ့မလား မသေချာဘဲ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလား ၃လုံးကို ၂ကြိမ်ယူထားတဲ့ ဘာစီလိုနာ
ဘာစီလိုနာရဲ့ ရာသီအဖွင့် ရလဒ်များ
၁) ဘီလ်ဘာအို ၁-၀ ဘာစီလိုနာ
၂) ဘာစီလိုနာ ၅-၂ ဘက်တစ်
၃) အိုဆာဆူနာ ၂-၂ ဘာစီလိုနာ
၄) ဘာစီလိုနာ ၅-၂ ဗလန်စီယာ
၅) ဂရန်နာဒါ ၂-၀ ဘာစီလိုနာ
၆) ဘာစီလိုနာ - ဗီလာရီးယဲယ် ( စက်တင်ဘာ ၂၄)
၇) ဂီတာဖေး - ဘာစီလိုနာ ( စက်တင်ဘာ ၂၈)
၈) ဘာစီလိုနာ - ဆဗီယာ ( အောက်တိုဘာ ၆)
၉) အေဘာ - ဘာစီလိုနာ ( အောက်တိုဘာ ၁၉)
၁၀) ဘာစီလိုနာ - ရီးယဲယ်မက်ဒရစ် ( အောက်တိုဘာ ၂၇)
ဆယ်လာဗီဂို ၂-၀ ဘာစီလိုနာ ( လာလီဂါ)
လီဗာပူးလ် ၄-၀ ဘာစီလိုနာ ( ချန်ပီယံလိဂ်)
အေဘာ ၂-၂ ဘာစီလိုနာ ( လာလီဂါ)
ဗလန်စီယာ ၂-၁ ဘာစီလိုနာ ( ဘုရင့်ဖလား ဖိုင်နယ်)
ဘီလ်ဘာအို ၁-၀ ဘာစီလိုနာ ( လာလီဂါ)
အိုဆာဆူနာ ၂-၂ ဘာစီလိုနာ ( လာလီဂါ)
ဒေါ့မန် ၀-၀ ဘာစီလိုနာ ( ချန်ပီယံလိဂ်)
ဂရန်နာဒါ ၂-၀ ဘာစီလိုနာ ( လာလီဂါ)
ဗယ်လ်ဗာဒေး လက်ထက် ဘာစီလိုနာရပ်တည်မှု
လာလီဂါ - ချန်ပီယံ၊ ချန်ပီယံ
ဘုရင့်ဖလား - ချန်ပီယံ၊ ဒုတိယ
ချန်ပီယံလိဂ် - ကွာတားဖိုင်နယ်၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်
စပိန်စူပါဖလား - ချန်ပီယံ၊ မပြိုင်ရသေး
อัลบั้มภาพ နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒေးနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်း ဘာတွေမှားနေလဲ